Ity “Boky Mahagaga sy Mahafinaritra” ity , izay “Tsy Misy Toa Azy sy Tsy Manam-paharoa” amin’izay efa noforonin’Olombelona , dia “POEZIA” manjary “Tantara” , voalahatra manaraka ny “Lalàn’ny Poezia Hebreo” , nosoratan’ olona sahiran-kevitra fatratra , raha nieritreritra ny “Fototra Mahatonga ny Fahoriana Samihafa Midona amin’ny Tsara Fanahy” .
Miseho ho Tantara izy ato amin’ny Baiboly, nefa tsy Tantara tsotra toy ny Tantara rehetra . Hita mibaribary tsara izany amin’ny “Toetry ny Teny sy ny Filaharany” .
Ohatra : Misongadina ao , ny Isa malaza, toy ny 3 , ny 5 , ny 7 .
· Misongadina ao koa ny “Singan’Olona Iray” hatrany hatrany , lazaina “Ho ny Hàny Afaka isaky ny Loza Mihatra” .
Tonon-kira manjary “Drama” na “Resak’Olon-droa”ity Boky ity , satria adi-hevittra arahim-pihetsehana , izay efa fanao nahazatra rahateo ny olona hatramin’ny fahagolan-tany , raha nisy hevitra tiany hohamarinina na hampianarina , ka tiana ho tafalatsaka lalina ao am-pon’ ny besinimaro .
Tsy mora velively ary ny manasongadina amin’ny fomba tsotra izay “Fampianarana” kendrena amin’ity Boky ity . Ny zava-dalina voalazan’ny Boky , dia tsy takatry ny sain’olombelona , ary na di any Boky aza dia “Tsy manome Fanazavana manaisotra ny fahasahiran-kevitra” . Fa izay mba hàny hita sy ampianariny indrindra , dia ny .”Toe-panahy tokony Hanekena ny Fahoriana midona sy Fanoavana ny Fitondran’Andriamanitra sy Fatokiana ny Fahendren’ny Tsitoha” .